Kaominina Antananarivo-Renivohitra:TSY MAHALOA NY KARAMAN’NY MPIASA INDRAY -
AccueilRaharaham-pirenenaKaominina Antananarivo-Renivohitra:TSY MAHALOA NY KARAMAN’NY MPIASA INDRAY
24/12/2016 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tsy mipetraka intsony ny fahatokisan’ny mpiasa. Miverina indray mantsy ny olana eo amin’ny fandoavan’ny kaominina Antananarivo-Renivohitra (CUA) ny karaman’ny mpiasa. Raha ny vaovao voaangona, tsisy nandray ny asany ireo mpiasa teny amin’ny biraon’ny kaominina teny Tsimbazaza, omaly, noho ny filaharana karama izay miendrika fitokonana teny an-toerana ihany. Nambaran’izy ireo fa tsy mety mamoaka karama ny eo anivon’ny fitantanana foiben’ny CUA. Voalaza tamin’izany fa tsy ampy handoavana karaman’ny mpiasa ny vola eo am-pelatanan’ny kaominina, amin’izao fotoana izao.
Niteraka fimenomenonana sy tsy fandraisana asa mihitsy, araka izany, ity ataon’ny CUA ny mpiasa eo anivony ity. Raha ny nambaran’ireo mpiasa mantsy, tsy vao izao ny CUA no manao ohatra izao fa efa miverimberina loatra. Voatery nampiaka-peo izy ireo amin’ny tsy fahaiza-mitanana eo anivon’ny CUA.
Voaporofo, araka izany, ny fanodinkodinam-bola ataon’ny mpitantana eo anivon’ny kaominina Antananarivo-Renivohitra. Tsy ny karama ihany mantsy ity tsy voaloa ity fa efa nandritra ity herinandro ity no tsy nandray asa ireo mpiasa teny anivon’ireo boriborintany sasantsasany noho ny tsy fisiana sy famatsian’ny CUA fitaovana ho azy ireo, toa ny “quittance”, ny fitombokase, sns.
Amin’izao fotoana izano anefa, betsaka ny vola miditra amin’ny kaominina amin’ireo hetsika “Tsenan’ny Noely” etsy sy eroa izay handraisan’izy ireo hofany avokoa ireo toerana rehetra voatokana hanaovana izany. Hatreto, tsy fantatra mazava izay fandehan’ny vola rehetra eo amin’ny CUA hany ka nampiteraka savorovoro teo amin’izy ireo sy ny mpiasa.
Misy tsy mazava araka izany, ny fitantanan’ny ben’ny tanàna, Lalao Ravalomanana, sy ny ekipany ny CUA.